ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင် ညက်မှာလည်းကင်းစောင့်နေတဲ့ သူထူးစံ – Cele Snap
ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင် ညက်မှာလည်းကင်းစောင့်နေတဲ့ သူထူးစံ
March 7, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ.. သရုပ်ဆောင်အနုပညာလောကမှာ အနုအရွဇာတ်ရုပ်တွေအပြင် အကြမ်းအရမ်းတွေမှာလည်း ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေရရှိထားကာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နေ သူကတော့ သူထူးစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။သူထူးစံကတော့ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လူထုလှုပ် ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေပြီး အားကြိုးမာန်တတ်နဲ့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ ရပ်တည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအားဖြည့်လုပ်ဆောင်နေသလို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကတည်းက ဒါရိုက်တာဂျိုးနဲ့အတူ ရပ်ကွက်ကင်းစောင့်တာဝန်ယူတွေယူခဲ့ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပါဝင်ခဲ့တာတွေ့ရပါ တယ်..။သူထူးစံကတော့လမ်းပေါ်ထွက်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ကာ ပြည်သူတွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာမမျှဝေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြားနားလည်မှုလွဲတာတွေရှိခဲ့ပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်နေသူပဲ ဖြစ် ပါတယ်..။
“ကိုသူထူးစံပြည်သူနဲ့အတူထာဝရရှိနေပါတယ်ရှင့် Thu Htoo San. .” ဆိုပြီး တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာအတူပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုသရုပ်ဆောင်နွေးယမင်းဦးထွေးက ပြန်လည်မျှဝေထားတာပါ..။ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးစကားလေးတွေပြောထားကြသလို ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ရှေ့ထွက်ကာ လမ်းပေါ်လူထု လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်နေကြတာတွေကို ချီးကျူးအားပေးထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. သရုပျဆောငျအနုပညာလောကမှာ အနုအရှဇာတျရုပျတှအေပွငျ အကွမျးအရမျးတှမှောလညျး ပီပွငျတဲ့သရုပျဆောငျကောငျးမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြခငျမှုတှရေရှိထားကာ အောငျမွငျစှာရပျတညျနေ သူကတော့ သူထူးစံပဲ ဖွဈပါတယျ..။သူထူးစံကတော့ မွနျမာပွညျမှာဖွဈပျေါနတေဲ့လကျရှိအခွအေတှနေဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ လူထုလှုပျ ရှားမှုတှပွေုလုပျနပွေီး အားကွိုးမာနျတတျနဲ့ တဈဖကျတဈလမျးကနေ ရပျတညျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျနျော..။
လူထုလှုပျရှားမှုတှမှောအားဖွညျ့လုပျဆောငျနသေလို ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတှကေတညျးက ဒါရိုကျတာဂြိုးနဲ့အတူ ရပျကှကျကငျးစောငျ့တာဝနျယူတှယေူခဲ့ပွီး ပွညျသူတှရေဲ့လုံခွုံရေးအတှကျ တကျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ပါဝငျခဲ့တာတှရေ့ပါ တယျ..။သူထူးစံကတော့လမျးပျေါထှကျလှုပျရှားမှုတှပွေုလုပျကာ ပွညျသူတှနေဲ့ရပျတညျနတေဲ့ သူ့ရဲ့လှုပျရှားမှုပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျပျေါမှာမမြှဝခေဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကွေားနားလညျမှုလှဲတာတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ တတျနိုငျသလောကျ အငျတိုကျအားတိုကျပါဝငျနသေူပဲ ဖွဈ ပါတယျ..။
“ကိုသူထူးစံပွညျသူနဲ့အတူထာဝရရှိနပေါတယျရှငျ့ Thu Htoo San. .” ဆိုပွီး တျောလှနျရေးတိုကျပှဲကွီးမှာအတူပါဝငျခဲ့ကွတဲ့ သူမတို့နှဈယောကျရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေိုသရုပျဆောငျနှေးယမငျးဦးထှေးက ပွနျလညျမြှဝထေားတာပါ..။ပရိသတျတှကေလညျး အားပေးစကားလေးတှပွေောထားကွသလို ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ရှထှေ့ကျကာ လမျးပျေါလူထု လှုပျရှားမှုတှမှော ပါဝငျနကွေတာတှကေို ခြီးကြူးအားပေးထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။
မြန်မာနိုင်ငံက လက်ရှိအခြေအနေကို ကမ္ဘာကသိအောင် ချပြပေးနိုင်ခဲ့လို့ ထိုင်းမီဒီယာမှာပါဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာနဲ့မြတ်နိုးအေး…..
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုလူမင်းအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးငိုရလွန်းလို့ မျက်ရည်တွေတောင်ခမ်းတော့မယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ခင်စံပယ်ဦး